ScienceOpen iyo Jaamacadda South Africa Press waxay bilaabeen server-ka hore-u-diyaarinta ee UnisaRxiv - AfricArXiv
Published by Johanssen Obanda on 25th Janaayo 2021 25th Janaayo 2021
Keyd wadaage ah ScienceOpen ayaa iskaashi la sameeyay Jaamacadda Koonfur Afrika (UNISA) Press si aad u abuurto adeegaha hore UnisaRxiv. UnisaRxiv waxay noqon doontaa gole si loo fududeeyo dib-u-fiirinta faca-fure ee qoraalladii hore iyo u oggolaanshaha faafinta degdegga ah ee natiijooyinkii ugu dambeeyay ee mowduucyada kala duwan.
Iskaashiga ay la leeyihiin ScienceOpen wuxuu fursad weyn u abuurayaa Unisa Press si ay u muujiso sida ay uga go'an tahay furitaanka sayniska. Intaa waxaa sii dheer, iskaashigani wuxuu taageerayaa dadaalkeena ku aaddan bixinta tikniyoolajiyad heer sare ah oo dhiirrigelisa faafinta degdegga ah ee cilmi baarista si daah furnaan ah, oo ku saleysan tayo iyo karti. Shaqaalaheena xirfadleyda ah, macalimiintayada, iyo ardayda qalin jabisay waxay ku faani karaan inay ogaadaan in shaqadooda ay hada heysato fursad lagu martigaliyo barxada u furta cilmi baaristooda khubarada-dib u eegista iyo faallooyinka, taas oo sare u qaadi doonta tayada shaqadooda. Waxaan ku faraxsanahay in Unisa Press ay barnaamijkaan u keeneyso kaliya daneeyayaasha Unisa laakiin dhamaan qaarada Afrika.
Dr. Meiya G. Nthoesane, Agaasimaha Unisa Press
Akhriso ogeysiiska asalka ah blog.scienceopen.com/2021/01/unisarxiv/
Ku saabsan Unisa Press
Jaamacadda Koonfur Afrika (Unisa) waxay ku taal Pretoria, mid ka mid ah saddexda caasimadood ee Koonfur Afrika, waxayna u adeegtaa arday aad u tiro badan oo ku dhow 400,000. Unisa Press waa qayb ka mid ah Unisa's Research, Postgraduate Studies, Innovation and Commercialization Portfolio waana saxaafadda ugu weyn jaamacadaha Afrika, oo daabacda buugaag iyo joornaallo labadaba.
ScienceOpen waa madal daahfur is-dhexgal ah oo loogu talagalay cilmi-baarista cilmiga ee dhammaan dhinacyada kala duwan. Laga soo bilaabo smart, raadinta kaladuwan ee uruurinta cilmi baarista, dib u eegista asxaabta furan, soo koobitaanno iyo inbadan, waxay bixisaa noocyo kala duwan oo xulashooyin ah si wax ku ool ah loogu helo loona wadaago natiijooyinka cilmi baarista | Website: scienceopen.com
ScienceOpen wuxuu gacan ka geystaa isgaarsiinta cilmiga ah ee Afrika iyadoo ay ka go'an tahay furitaanka Sayniska Furan iyo Furan iyadoo loo marayo nidaam faahfaahsan, la heli karo, daahfurnaan iyo isla xisaabtan leh oo dib-u-eegis asaag ah oo loogu talagalay maqaallada la soo raray, iyo iyada oo loo xilsaarayo aqoonsi shay dijitaal ah oo bilaash ah cilmibaaraha.
Wadashaqeynta AfricArXiv iyo ScienceOpen
Baro sida loogu gudbiyo AfricArXiv adoo adeegsanaya ScienceOpen
Ka aqriso ogeysiiska iskaashigeenna barta africarxiv.org/scienceopen-partnership/
Baadhitaankeena ScienceOpen aruurinta COVID-19 ee ka socda iyo ku saabsan Afrika at scienceopen.com/collection/COVID19_Africa
Soo hel AfricArXiv waxyaabaha ku jira ScienceOpen ee loo soo gudbiyey annaga ScienceOpen ururinta at scienceopen.com/collection/2a0d303c-24e0-4a42-a13d-3484c5df6cc0
Categories:	iskaashiFuran FuranOgeysiis iskaashi ah